Europapark युरोप को सबै भन्दा ठूलो र सबै भन्दा लोकप्रिय पार्क छ, दाँया पछि डिज्नील्याण्ड. तथापि, कि हामी यसलाई रोजे किन छैन. यो सबै भन्दा राम्रो मनोरञ्जन किनभने रोलर-कोस्टरस हाम्रो विचारमा युरोप मा पार्क को एक हो. तपाईं त साँच्चै अद्वितीय व्यक्तिहरूलाई तिनीहरूलाई धेरै र धेरै सवारी प्राप्त हुनेछ. तपाईं आर्थर जाँच गर्नुपर्छ – साथै एक गाढा सवारी एउटा इन्डोर / आउटडोर एक संयोजन भन्ने नयाँ रोलर-कोस्टर!
तपाईं जंग यो अचम्मको विषय पार्क पाउन सक्नुहुन्छ, Freiburg एउटा शहर नजिक र स्ट्रासबर्ग. त्यो तपाईं रेल द्वारा एकदम सजिलै Europapark पुग्न सक्दैन भन्ने हो, कुनै पनि शहर बाट. को रेल स्टेशन तपाईं त प्रवेश गर्न हिंड्न सक्छौं त्यसैले केही 4km टाढा छ, वा नियमित को एक ले बसें कि पार्क जाने.
तपाईं आफ्नो साइट मा हाम्रो ब्लग पोस्ट इम्बेड गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ या त हाम्रो फोटो र पाठ लिन र बस सक्नुहुन्छ यो ब्लग पोस्ट एउटा लिङ्क हामीलाई क्रेडिट दिन, वा यहाँ क्लिक: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/best-amusement-parks-europe/- (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
#AmusementParks #efteling #PortAventura #traveleurope eurotrip ट्रेन यात्रा सल्लाह यात्रा